'एनआरएनए अष्ट्रेलियाले नेपाललाई होइन अष्ट्रेलियाको नेपाली समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ' - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०९:३९ |
मेलबर्न । एनआरएनए ( गैरआवासीय नेपाली संघ ) अष्ट्रेलियाको निर्वाचन नजिकिंदै छ । नयाँ कार्यकालको लागि एनआरएनए अष्ट्रेलियाको निर्वाचन आगामी जुलाई ६ मा हुने भएको हो ।
एनआरएनए अष्ट्रेलियाको निर्वाचन तथा महाधिवेशनको विषयलाई लिएर हिमालयन कंगारुले संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष टोनु घोतानेसंग छोटो कुराकानी गरेको थियो । उक्त कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
एनआरएनए अष्ट्रेलियाको आसन्न निर्वाचनको तयारि कस्तो चलिरहेको छ ?
निर्वाचनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसै अनुरुप तयारि भइरहेको छ । उम्मेद्वारका आकांक्षीहरुका लागि निश्चित नियमहरु सार्वजनिक गरिसकेका छौं । उहाँहरु पनि त्यही अनुसार तयार हुनुभएको पाएका छौं । यसपाली एनआरएनको लोगोलाई प्रचारमा नल्याउन अनुरोध गरेका छौं, जसअनुसार साथीहरुले लोगो बिना आफ्ना एजेन्डा, अनुभवलाई मुख्य जोड दिएर मतदाता समक्ष पुग्ने कोसिस गरेको पाएका छौं । यसको साथै मतदान व्यवस्थित गर्नको लागि पूर्वतयारि भइरहेको छ ।
यसपटकको महाधिवेशनका मूल एजेन्डा के-के छन् ?
यसपालीको महाधिवेशन आगामी अगस्ट १० मा हुनेछ । त्यसको लागि हाम्रो मूख्य नारा ‘ Think Global , Act Local ‘ रहनेछ । एनआरएनको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिंदा मेरो जुन नारा थियो त्यही नै महाधिवेशनको मूख्य नारा रहनेछ । मेरो विचारमा एनआरएनएले पहिले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको बारेमा सोंच्नुपर्छ अनि मात्र नेपालको बारेमा सोंच्नुपर्छ । यसअगाडी एनआरएनएले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्यो, जसले गर्दा यहाँ बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुका समस्या र चाहनाहरु सम्बोधन हुन सकेनन् । मैले उक्त नारा ल्याएपछि एनआरएनएका अन्य साथीले पनि मन पराउनुभयो र हामीले सोही अनुसार काम गर्यौं । त्यसैले संस्थाकै निर्णयमा यो वर्षको महाधिवेशनको मूख्य नारा ‘ Think Global , Act Local ‘ हुनेछ, जसमा यहाँ बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुसंग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
सबैभन्दा बढी सदस्यता संख्या भएको एसोसिएट संगठनको मतदान कसरि हुन्छ ?
एसोसिएट संगठनको मतदानलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले तयारि गरिरहेका छौं । एसोसिएट संगठनको मतदानमा ५० प्रतिशत अनलाइन र ५० प्रतिशत बुथबाट हुनेछ । ग्रामिण क्षेत्रबाट मतदाताहरुले अनलाइन मतदान गर्नेछन् भने सहरी क्षेत्रका मतदाताहरुले बुथमा गएर मतदान गर्नेछन् ।
भावी नेतृत्वका लागि हाल देखिएका आकांक्षीहरुप्रति तपाईंको दृष्टिकोण कस्तो छ ?
अहिले जति पनि आकांक्षीहरु देखिनुभएको छ उहाँहरु सबैजसो अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अष्ट्रेलियामा संघर्ष गरेर आफूलाई एउटा स्थापित ठाउँमा पुर्याउनुभएको छ, नेपाली समाजको हितको लागि व्यक्तिगत रुपमा र विभिन्न समूह, संघ संस्थामा आबद्ध रहेर योगदान गर्नुभएको छ । यसको साथै उहाँहरुसंग एनआरएनए अष्ट्रेलियामा रहेर काम गरेको अनुभव समेत छ । त्यसैले एनआरएनएले आउँदो कार्यकालको लागि राम्रो नेतृत्व पाउनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
नयाँ नेतृत्वबाट यहाँका अपेक्षा के-के छन् ?
अब एनआरएनएले नेपाली समुदायको हितको लागि अष्ट्रेलियन सरकारसंग लबिङ्ग गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय नेपाली व्यक्तिहरु अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा देखिन थाल्नुभएको छ । भावी नेतृत्वले नेपाली समुदायको बृहत्तर हितको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यसको साथै आगामी पुस्तालाई नेपाली भाषा, नेपाली कला, संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिनको लागि विभिन्न योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
तपाईंको कार्याकालको उपलब्धि र भावी नेतृत्वले निरन्तरता दिनुपर्ने एजेन्डा वा कार्यक्रम के-के छन् ?
मेरो यो दुई वर्षे कार्यकालमा नेपाली समुदायलाई विपदको समयमा सहयोग गर्नको लागि हेल्प डेस्क, Rapid Response Team स्थापना भयो । यो टिममा मानसिक स्वास्थ्य, घरेलु हिंसा आदिका छुट्टाछुट्टै टिमहरु बनाइएका छन् । ती टिमहरु सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु हुनुहुन्छ, जसले नेपाली समुदायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहुन्छ । Rapid Response Team अष्ट्रेलियाका सबै राज्यमा स्थापना गरिएको छ । यसको साथै मेरो कार्यकालमा एनआरएनए अष्ट्रेलियाको विधान बन्यो । संस्थाले १२ हजार सदस्य बनाउन सफल भयो, जुन अहिलेसम्मको र अरु देशको तुलनामा समेत उच्च हो । हाम्रो कार्यकालमा भएका कामहरुले नेपाली समुदायको मन जितेका कारण नै सदस्यहरु बढ्नुभयो । त्यस्तै, मेरो कार्यकालको मूख्य उपलब्धि संस्था दर्ता पनि हो । सिड्नीमा मात्र दर्ता भएको संस्था अहिले सबै राज्यमा दर्ता भएको छ । हाम्रो कार्यकालले उठाएका मुद्दा, गरेका राम्रा कार्यलाई आगामी कार्यकालमा आउने साथीहरुले निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अन्त्यमा, एनआरएनए प्रति विद्यार्थीहरुको वितृष्णा देखिएको किन होला ?
यसलाई म वितृष्णा भन्दा पनि मायाको रुपमा लिन्छु । विद्यार्थीहरुले हामीलाई यहाँ अभिभावक ठान्छन् । स्वाभाविक हो, अभिभावकले आफ्नो कुरा बुझिदिएन भने सन्तान निराश हुन्छ र गुनासो गर्छ । अबको कार्यकालले विद्यार्थीको यो गुनासोलाई पनि मध्येनजर गर्दै काम गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो कार्यकालमा विद्यार्थीहरुका लागि हेल्प डेस्क, सीपमुलक तालिम आदि कामको सुरुवात भयो । मलाई लाग्छ, आगामी नेतृत्वले यी कामहरुलाई निरन्तरता दिंदै विद्यार्थीहरुका लागि थप केही नयाँ कायक्रमहरु ल्याउनेछ ।
Previousनेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत
Nextअनुहारमा फाउन्डेसन लगाउने सही तरिका (भिडियो)
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०५:५४
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा प्रेमिका संगै मृत अवस्थामा भेटिए एक नेपाली युवा
४ माघ २०७४, बिहीबार ०४:५८
सुरेन्द्र सेंढाई होम लोन परामर्शदाताको टप टेनमा
२० चैत्र २०७२, शनिबार ०४:४३